Namhlanje ngifisa sike sidingide indaba ye G-spot yabantu besilisa. Ngiyazi omunye uzothuka ukuthi kanti nabesilisa banayo le ndawana okuthi uma ithintwa idlaliswa ikitaze kamnandi esiyibiza nge G spot nedala ukuthi umdlalo omuhle uthokozeleke futhi ube mnandi kakhulu.
Ngokujwayelekile iG-spot yaziwa ngokuthi itholakala kwabesifazane kuphela kodwa ongoti bezocansi sebekuqinisekisile ukuthi nabesilisa banayo. Yize kuvela ukuthi iningi labesilisa liyakuphika lokhu ngoba likubona njengehlazo kwazise iG-spot yabo itholakala endaweni "ebucayi". Ongoti bathi le ndawana yowesilisa itholakala ngemumva endaweni yokuzikhulula nokuyilapho beveze khona ukuthi ukudlalisa owesilisa ngemumva ngomunwe okanye ngolimu lokhu esikubiza ngeRimming, kwenza ukuthi owesilisa ajabule ngokwedlulele futhi asheshe athunde. Baze bathi kuyenzeka agcine efike kuvuthondaba uqobo ngendlela okumnandi ngakhona.
Yize iningi labesilisa likuphika lokhu futhi lithi lona ngeke livume ukwenziwa "lo msangano" ngoba bakholelwa ukuthi lokhu kwenziwa abasilisa abathandana bodwa kodwa bakhona abavumayo ukuthi impela kumnandi. Bakhona futhi nabesifazane abathi bayakwenza lokhu kubantu babo futhi bakhombisa ukukuthokozela impela baphinda bagcizelele nokuthi akulona uphawu lokuthi abantu babo babuye bacambalale namanye amadoda. Abanye besifazane bathi ukudlalisa amasoka abo kubenza inkomo inyakaze mawala nokudala umdlandla nokulangazelelana okusheshayo. Uphinde wakhuthaza abesilisa ukuthi bayeke ukuzincisha ngoba bebuswa okusemqondweni yabo.
Namhlanje ngifisa ukukhuthaza amadoda ukuthi noma ngabe yini eletha umdlandla ocansini lakho nomuntu wakho ungakuyeki ngoba uhlohlene nabangani bona ongabazi ukuthi benzani ebusuku nabantu babo,ucansi yinto yabantu ababili akekho osuke ebona ukuthi wena nomuntu wakho nenzani yingakho ngihlale ngisho ukuthi yenzani noma ngabe yini ezonijabulisa ukuze niqinise uthando lwenu. Ngifisa nabesifazane bayeke ukujaja abesilisa abathanda ukwenziwa lokhu,Uma Isoka lakho ungakaze ulenze lokhu awuke ukuzame ubone ukuthi lizokwamukela yini okanye angeke. Nami sengike ngakuzama esokeni lami ngabona indoda ithamba sengathi inkukhu ecwile esjingini maqede yangithela ngenqwaba yesidoda
Uma nithandana ayikho into eyihlazo ningenza noma ngabe yini inqobo nje uma nizojabula ngendlela enifuna ngayo. Ngesikhathi ulikhotha isoka lakho dlula impela wehle njalo ngenduku uze uyofika emabholeni uthi ukuwaphosa kabili kathathu emlonyeni bese udlulela kule mbobo ekamakhelwane ngolimu. Konke lokhu kwenziwa uma umuntu egezile wagezisisa bakwethu ngoba kusendaweni ecezile.
Elawini LikaMaGumede sikulethela izindaba zothando nocansi ezihlabahlosile abantu abasabayo ukuxoxa ngazo,inhloso ukwakha nokulungisa uthando nocansi ukuze kubemnandi endlini. Ungasithumelela email noma usishayele ucingo okanye uthumele uWatsap ukuze uxhumane nathi
Contact number- 0799771723